Supermap - vahaolana matanjaka 2D sy 3D GIS feno - Geofumadas
Aprily, 2019 jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Supermap GIS dia mpamatsy tolotra GIS efa ela ary manana firaketana an-tsoratra hatramin'ny nanombohany tamina vahaolana marobe tamin'ny tontolon'ny geospatial. Niorina tamin'ny 1997 ny vondrona manam-pahaizana sy mpikaroka miaraka amin'ny fanohanan'ny Akademia Sinoa momba ny siansa, ny toby fiasa misy azy dia ao Beijing-China, ary azo lazaina fa ny fitomboany dia nandroso tany Azia, fa Hatramin'ny 2015 dia nanana sehatra fanitarana mahaliana izy noho ny fanavaozana ny haitao GIS marobe, ny GIS eo amin'ny rahona, ny 3D GIS ho avy, ary ny mpanjifa GIS.
Tao amin'ny tranobeny FIG herinandro any Hanoi, dia nanam-potoana hiresahana zavatra isan-karazany ataon'ity rindrambaiko ity izahay, nefa tsy fantatry ny ankamaroan'ny tontolon'ny tandrefana. Taorian'ny fifandraisana maromaro dia nanapa-kevitra ny hanoratra lahatsoratra momba ny tena nahagaga ahy ny Supermap GIS aho.
Ny SuperMap GIS, dia ahitana teknolojia maromaro -sehatra- izay misy fitaovana fanodinana angona geospatial sy fitaovana fitantanana. Hatramin'ny 2017, ireo mpampiasa dia afaka nankafy ny fanavaozana azy, Supermap GIS 8C, na izany aza, ity SuperMap 2019D 9 ity dia navoaka ho an'ny besinimaro, izay misy rafitra teknolojia efatra: GIS ao anaty rahona, GIS multiplatform mitambatra, 3D GIS ary BigData tsaoka.
Mba hahafantaranao bebe kokoa ny antony ilàna azy ho toy ny vahaolana tsy azo lavina, tsy maintsy fantatrao ny fomba namoronanao ny vokatrao, izany hoe ny tsirairay amin'izy ireo manolotra.
Ny multiplatform GIS, no mandrafitra azy: ny iDesktop, ny GIS Component, ary ny GIS Mobile. Ny voalohany amin'ilay iDesktop voalaza etsy ambony, novolavolaina mifototra amin'ny plug-ins -fanampin-tsakafo- mifanaraka amin'ny CPU isan-karazany, toy ny ARM, IBM Power na x86, ary miasa mahomby Na izany na tsy miasa ny tontolo iainana izay nametraka ny Windows, Linux, ka mampiditra 2D endri-javatra sy ny 3D.
Ny karazana mpampiasa, olona, ​​orinasa na governemanta rehetra, dia afaka mampiasa ity rindrambaiko birao ity, satria mora be ny mampiasa azy ary namboarina tamin'ny fomban'ny rindranasan'ny Microsoft Office. Amin'ity rindranasa ity dia ho hitanao ireo fitaovana rehetra izay azo zahana amin'ny GIS amin'ny birao rehetra momba ny fandefasana sy ny fampisehoana data, ny fananganana entity, na ny fizotry ny fandalinana, izay ampidirina ny fidirana amin'ny serivisy sarintany tranonkala, fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpampiasa. Anisan'ireo mampiavaka azy amin'ny asany, ireto manaraka ireto dia miavaka: ny fitantanana sy ny fampisehoana sary an-tsary, ny BIM, ary ny cloud cloud.
Raha ny momba ny GISMobile dia afaka miasa amin'ny tontolon'ny iOS na Android izy io, ary azo ampiasaina ivelan'ny Internet na data 2D na 3D. Ny rindranasa izay atolotry ny Supermap Mobile (SuperMap Flex Mobile sy Supermap iMobile), dia misy ny fanadihadiana eny an-tsaha, ny fambolena marina, ny fitaterana an-tsaina na ny fizahana fotodrafitrasa, ny sasany amin'ireny dia mety hajain'ny mpampiasa.
GIS amin'ny rahona
Iray amin'ireo fironana tsy azo ihodivirana sy tsy azo ovaina amin'ny fitantanana data geospatial. Izy io dia sehatra mifandray amin'ny terminal GIS marobe mba hahafahan'ny mpampiasa / mpanjifa manangana vokatra amin'ny fomba mahomby sy milamina. Izy io dia ahitana ny SuperMap iServer, SuperMap iManager ary SuperMap iPortal, izay misy antsipiriany etsy ambany.
iServer SuperMap: izay sehatra avo lenta, izay ahafahanao manao asa toy ny fitantanana sy ny fikarakarana ny serivisy 2D sy 3D, ary koa ny fanomezana loharanom-pampandrosoana. Miaraka amin'ny iServer SuperMap, afaka miditra amin'ny serivisy momba ny angon-drakitra data, fampahafantarana amin'ny angona angona ianao na fananganana Big Applications.
SuperMap iPortal: tranonkala tafiditra ho an'ny fitantanana ireo loharanom-pifampizarana GIS - fikarohana sy fampiakarana, famoaham-bokan'ny serivisy, fanaraha-maso fidirana amin'ny fidirana amin'ny aterineto, fanampiana teknolojia ho an'ny famoronana sarintany.
Supermap iExpress: Natao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny sehatra, amin'ny alàlan'ny serivisy proxie sy ny teknolojia fanapaha-kevitry ny cache. Miaraka amin'i iExpress dia azo atao ny manangana fitaovana fampiasa amin'ny tranokala vohikala marobe. Ankoatra izany, dia mamela ny famoahana haingana ny vokatra, toy ny 2D sy 3D mosaics.
SuperMap iManager: ampiasaina amin'ny fitantanana sy ny fikojakojana ny serivisy, fampiharana ary ny angona betsaka. Manohana ny vahaolana Docker - teknolojia-container - izy mba hahatratrarana ny fametrahana ny GIS amin'ny rahona, ary ny famoronana Big Data, ahafahana manatsara ny fahombiazany sy ny fanjifana ny harena. Mifanaraka amin'ny sehatra maro ao amin'ny rahona izy io, ary miteraka indraindray mpanara-maso mpanara-maso.
SuperMap iDataInsight: dia mamela ny fidirana amin'ny angona avy amin'ny solosaina, avy amin'ny ordinatera - ao an-toerana - ary ao amin'ny tranonkala, dia miantoka fa ny mpampiasa dia afaka manana endrika fanehoana dynamique ny angon-drakitra, amin'ny fitrandrahana azy aoriana. Izy io dia ny fanohanana ny famoahana angona ao anaty takelaka, tranonkala ao anaty rahona, sary manankarena.
SuperMap Online: Ity vokatra ity dia manao zavatra mety amin'ny maro, manofa sy mampiantrano angona GIS an-tserasera. Ny SuperMap Online dia manome ny mpampiasa GIS fampiantranoana ao anaty rahona hahafahan'izy ireo manangana mpizara GIS ampahibemaso, izay ahafahan'izy ireo mampiantrano, manangana ary mizara angona data. SuperMap Online, dia mitovy amin'ny atolotry ny ArcGIS Online, ny fampiasa dia mivondrona ao toy ny: fizotran'ny famakafakana (buffer, interpolations, fitrandrahana fampahalalana, fandrindrana ny fanovana na ny fikajiana ny lalana sy ny fivezivezena), ny fandefasana data, ny famoahana ary ny fomba fizarana angona an-tserasera, karazana SDK ho an'ny mpanjifa, fidirana amin'ny angona foto-kevitra.
Ny vokatra SuperMap dia nampifandray ny fitantanana angona 2D sy 3D, miaraka amin'ireo fiasa sy fitaovana ilaina azo atao izany: ny maodely BIM, ny fitantanana ny angona fotogrammetric miavaka, ny fandrafetana ny angona avy amin'ny scanner laser (cloud point), ny fampiasana singa vector na 2D raster izay anampiana ny angon-drakitra momba ny haavo sy ny endrika hamoronana zavatra 3D.
SuperMap, dia nanao ezaka ho an'ny fanamarinana ny data 3D, miaraka amin'izany no ahafahana mampivondrona sy manampy teknolojia toy ny: virtual reality (VR), WebGL, augmented reality (AR), ary 3D fanontana. Manohana ny angona vector (teboka, polygon, tsipika) ary koa ireo antokon-tsoratra (an-tsoratra CAD), mamaky mivantana ny data REVIT sy Bentley, modely fananganana nomerika ary data GRID; Azonao atao ny mamorona angon-drakitra ho an'ny fananganana meshes textured, fandidiana miaraka amin'ny voxel rasters, fanohanana ny fikajiana dimensionalité na ny fanampiana effets amin'ny zavatra.
Ny sasany amin'ireo fampiharana ao amin'ny tontolo 3D SuperMap dia:
Fampiharana ny simulation fananganana: manangana drafitra fandaharam-potoana amin'ny fanatanterahana ny fanivànana sivana avo lenta sy ny fampiroboroboana voajanahary amin'ny singa tena izy.
Fandaharan-drafitra momba ny planeta: araka ny faritra sy ny toetran'ny modely 3D, ny rafitra dia manangana singa toy ny lalana.
Fanadihadihana 3D: misy ny fahafahana manara-maso ny loharanon-karena voajanahary sy ny fananan-tany, mamaritra ny toerana misy azy ary mamorona drafitra fiarovana.
GIG DATA GIS
Amin'ny alàlan'ny teknolojia SuperMap, ny sary, ny fitahirizana, ny fanodinana angona, ny fizahana ny habaka ary ny fizotran'ny fandefasana data dia azo tanterahina amin'ny fotoana tena izy, ity dia fanavaozana eo amin'ny sehatry ny GIS + Big Data. Manome ny SuperMap iObjects ho an'ny Spark, sehatra fampandrosoana ny singa GIS, izay manome ny mpampiasa ny fahafaha-manao GIS ilaina amin'ny fikirakirana ny Big Data. Etsy ankilany, azo lazaina fa manome teknolojia fampisehoana mavitrika avo lenta amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fanovana ny sarintany map, ny fanavaozana ary ny fisehoana ny tena izy, ny tranomboky loharano misokatra ary ny teknolojia fampisehoana data angon-drakitra lehibe koa atolotra. (sary an-tsaha, thermograms, sarintany an-tsarintany na sarintany fitsangatsanganana.
Ireo fampitaovana voalaza etsy ambony dia ampiasaina hanatsarana ny fahatakarana ny tontolo iainana, izay midika ho fivoarana sy fandraisana fanapahan-kevitra momba ny lohahevitra toy ny: Smart City, Public Services, Urban Management and Natural Resources. Natao sary an-tsary ireo fandalinana tranga, izay nampiasan'izy ireo ny fampiasana ny SuperMap sy ny teknolojia misy azy, izay azo lazaina: Ny rafitra fitantanana an-tanànan'ny Distrikan'i Chogwen - Beijing, ny rafitra ara-jeografika an'ny tanàna nomerika miorina amin'ny rahona , Japan Disaster Geoportal, Rafitra fampahalalana ho an'ny Toeram-piaran-dalamby mizotra lehibe any Japan miorina amin'ny SuperMap, sy ny sehatra faminavina hain-tany.
Raha raisintsika ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony, ohatra: Rafitra fampahalalana ho an'ny tranoben'ny lalamby lehibe any Japon miorina amin'ny SuperMap, tokony hofaritana fa SuperMap Gis, mitantana ny toerana misy ny lalamby rehetra any Japon, ka ny habetsaky ny angona dia tena midadasika sy mavesatra, ankoatry ny fitakiana sehatra iray mahafeno ny fepetra takiana amin'ny kalitao sy ny fifandraisana.
SuperMap dia nampihatra serivisy Internet sy Intranet, miampy maodely fitantanana data miaraka amin'ny SuperMap Objects, izay misy ny fangatahana fampahalalana momba ny habaka, ny fanavaozana ny statistika, ny fanavaozana ny habaka (fametrahana ny marika sy ny endri-javatra), ny fakana an-tsarintany, ny famakafakana ny buffer, famolavolana ary fanontana; izany rehetra izany dia tamin'ny alàlan'ny mpijery fampahalalana manokana - namboarina tao amin'ny SuperMap-, ho an'ny angon-drakitra vokatr'ity orinasa ity ihany, izay nihaona tamin'ny andrasan'ny vondrona JR Atsinanana Japon izay mitantana ny rafitry ny lalamby.
Mahaliana vahaolana momba izany, tsy manana ahiahy, ny fampiasana, feno ary vokatra isan-karazany tsipika, fampidirana ny vokatra, milamina ny fanatanterahana ny asa, ary nampiasaina tsara dia mety ho tsara ho an'ny orinasa hafa mifantoka amin'ny vokatra. Ny vokatra natolotra dia tsy natao fotsiny ho an'ny jeografia na geomatics, fa koa efa nitondra ny governemanta sy ny fandraharahana vatana, izay, amin'ny alalan'ny fampiasana azy, afaka maka sary mifanaraka amin'ny zava-misy fanapahan-kevitra.
Previous Post«Previous Fijerena fotoana - Plugin hidirana amin'ny sary zanabolana manan-tantara amin'ny AutoCAD
Next Post Ny lozam-pifamoivoizana lasibatry ny 3D dia nahazo ny loka IF DESIGNmanaraka »